The SEO Nyocha site na SEO Buddy is ụzọ gị gaa ọrụ SEO ọ bụla dị mkpa Ikwesiri iwere iji bulie weebụsaịtị gi ma nweta ahia ahia. Nke a bụ ngwungwu zuru oke, n'adịghị ka ihe ọ bụla m hụla na ntanetị, na-enyere aka na azụmaahịa na-enyere ha aka ịga n'ihu na-ebuli saịtị ha ma bulie ọhụụ ha na ọchụchọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na SEO na mgba, na SEO Nyocha ga - enyere gị aka ịghọta nnukwu foto nke ihe ịkwesịrị ime iji bulie ma debe saịtị. Iji ngwa na akwụkwọ ntanetị, ị ga-enwe ike ịgbaso ihe ị nwere ma ịmebeghị ka ị ghara ileghara usoro ọ bụla dị mkpa anya.
Nke a abụghị ịzụta otu oge, ma! SEO na - agbanwe agbanwe mgbe niile mgbe ịzụrụ ya SEO Nyocha, ị ga-enweta ohere ndụ gụnyere mmelite niile ga - eme n'ọdịnihu n'efu.
Y’oburu na ichoro SEO, nke a bu oke egwu. Ihe m huru banyere ya bu ihe doro anya. Ọ dịka ịnwa ịme egwuregwu jigsaw na ịhụ foto ahụ na nke mbụ ya. Know maara ihe ọ dị mkpa ka eme.
Ọ bụrụ na ịchọrọ 25% kwụsịrị ụgwọ nke SEO Checklist, jiri koodu MARTECHZONE mgbe ị na-ndenye ọpụpụ! Ga-enwetakwa ego ọzọ na ndenye ọpụpụ.
Ngosi: Abụ m mmekọ maka SEO enyi.